XCOM 2: Hondo Yevakasarudzwa Zvakare Kuuya KuLinux | Linux Vakapindwa muropa
Tine nhau dzakanaka, se mumwe wemitambo yaitarisirwa kwazvo, XCOM 2: Hondo Yeakasarudzwa, ichauyawo kuLinux masisitimu anoshanda, achiuya zvirokwazvo kubva paruoko rweStam. Uyu mutambo kuwedzerwa kweanozivikanwa XCOM 2, mutambo wave uchiwanikwa weLinux kubvira Kukadzi gore rapfuura.
Izvi zvakawedzeran ichave ichiwanika kune vashandisi veMac OS X, nekudaro uri mutambo unowanikwa kune vese. Nekudaro, vekutanga kunakidzwa nemutambo vachave vashandisi veWindows senguva dzose. MuWindows vachazove nayo muna Nyamavhuvhu 29 uye isu tichafanirwa kumirira kwenguva yakati rebei kuti tinakirwe nemutambo, kunyangwe isu tisati taziva mazuva chaiwo
Uyu mutambo unouya kunatsiridza iyo yekutanga XCOM 2, inofungidzirwa seimwe yemitambo yegore muna 2016. XCOM 2: Hondo Yeakasarudzwa inounza nhau dzakakosha, senge kuvandudzwa kwemupepeti wemasoja uye kugadzirisa mugadziriro yemutambo, kunyangwe tichireva zano, pamwe nekudzokororwa sarudzo. Tichavawo nematambudziko matsva enharaunda nezvinangwa zvitsva mumamishini akasiyana.
Uyewo, tichava nezvikamu zvitatu zvitsva zvemauto, mapoka matsva uye mavara matsva. Kana iwe uchida kuziva zvimwe zvakawanda, pamusoro apa isu takusiira iwe tirera yemutambo, kuti iwe ugone kuzvionera wega nhau yejusi.
Pasina mubvunzo Nhau huru kune vashandisi veLinux, iyo yatinayo mitambo yakawanda uye yakawanda inowanikwa muStam catalog. Mutambo wese unobuda papuratifomu iyi inhanho kumberi kuti ifanane neWindows, kunyange zviri pachena kuti tichiri kure.
Panguva ino, isu tichafanirwa kumirira zvirinani kusvika mwedzi waGunyana kunakidzwa nemutambo uyu paLinux. Parizvino, iwe unogona kutamba yekutanga XCOM 2, iyo nenzira iyo inodikanwa kuti ukwanise kutamba kuwedzera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » XCOM 2: Hondo yeakasarudzwa iri kuuyawo kuLinux
Mubvunzo ndewkuti ichave yemahara kana kuti ndichifanira kuibhadharira nekuti mu steam inoratidzika kwandiri asi isina mutengo uye kana iri sevamwe zvinoita kwandiri kuti haina kubhadhara uye kuti ndingade nekuti chii mutambo mukuru ndatotora maawa zana negumi
Parizvino hapana ruzivo rwunozivikanwa pamusoro pemutengo wepamutemo kana kuti ichave yemahara. Kana zvirizvo, chingave chinhu chakakura kwazvo pasina kupokana.
Fedora 26 yekutanga beta vhezheni yava kuwanikwa